XOG RASMI AH+AKHRISO: Jawaari oo Mooshin laga diyaariyey, Dufaano bilowday & Eedaha loo soo jeediyey guddoonka baarlamaanka. – Puntlandtimes
XOG RASMI AH+AKHRISO: Jawaari oo Mooshin laga diyaariyey, Dufaano bilowday & Eedaha loo soo jeediyey guddoonka baarlamaanka.
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday jiritaanka Mooshin cusub oo laga gudbiyey Gudoomiyaha baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, kaas oo ay qoreen in ka badan 140 Xildhibaan, kuna doonayaan in isbedel lagu sameeyo hogaaminta baarlamaanka Faderaalka.
Xildhibaanadan oo u badan kuwa ka soo jeeda gobalada Baay & Bakool ayaa xoogooda iskugu geynaya sidii uu meelmar ku noqon lahaa Mooshinkooda cusub, waxayna ku eedeynayaan gudoomiyaha in uu garab maray sharciyadda baarlamaanka.
Nuqul kamid ah mooshinkan oo ay aragtay Puntlandtimes.com wuxuu cadeynayaa eedo fara badan oo lagu soo oogay gudoomiyaha baarlamaanka, waxaana ugu waa weyn.
In uu gudoomiyuhu is hor istaag ku sameeyey Sharuuc badan oo ay ahayd in ay ansixiyaan mudanayaasha golaha baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya
In shaqadii golahan ay la wareegtay madasha Hogaamiyaasha Soomaalida oo uusan gudoomiyuhu xataa kala hadlin madaxda ay khuseyso.
In guddiyo gaar ah loo sameystay arrimaha Dastuurka, Doorashooyinka, Kheyraadka dalka iyo heshiisyada caalamiga ah oo ay dhamaantood ahayd in la horkeeno baarlamaanka Faderaalka.
In gudoomiyuhu curyaamiyey arrimaha dibu eegista Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya, uuna si gaar ah ula saftay dhinacyada is haya mid kamid ah.
In uu Madaxda dawladda Faderaalka kala shaqeeyo sidii aysan Aqalka golaha baarlamaanku awood ugu yeelan laheyn arrimaha dibu dhiska ee dalka.
Sidda ka muuqata eedahan ayaa ah kuwa culus oo ay adag tahay in xiligan si fudud looga jawaabo, balse mudanayaasha saxiixay ayaa ah kuwa saameyn badan ku dhex leh baarlamaanka Faderaalka, iyadoo maanta March 12, 2018 lafilayo in loo gudbiyo guddoonka baarlamaanka Faderaalka.
Warar hoose oo laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu saacadihii ugu dambeyey socday kulamo siyaasadeysan oo ay qeyb ka ahayd Madaxtooyada Soomaaliya, ayna doonayso in lagu difaaco gudoomiyaha baarlamaanka, laakiin duufaanada siyaasadeed ayaa sii kobcaya haddii ay dhacdo in Madaxtooyadu faragalin kusameyso mooshinkaas cusub.
Gudoomiye Jawaari ayaa ka mid noqon doona golaha baarlamaanka oo uu dhex fariisan doono, hadii la qabto mooshinkiisa, waxaana uu ku guuldareysanayaa in uu shir gudoomiyo kalfadhiyada golaha ilaa inta go`aan rasmi ah laga gaari doono.
Xildhibaanada gobalada Waqooyi Galbeed ee la baxay Somaliland & Koonfur Galbeed ayaa isku leh xildhibaano tiro ahaan gaaraya 121 Xildhibaan, taas oo ka dhigan in ay tahay aqlabiyad ku dhawaad, balse guddoonka in uu xilkiisa waayo ayay u baahan tahay Xildhibaano tiro ahaan intaas ka badan, waxaana haddii lagu guuleysto ay wado ku furaysaa Hay’adda Fulinta oo ay hadda dul-fadhiyaan arrimo waa weyn oo siyaasadeed.